Top 10 Ndepụta Okwu Onye kere Software a
Ndepụta okwu bụ captions hụrụ na ala nke ihe na transliterate okwu nke ihe odide. Iji nyere na-eme ndepụta okwu, anyị nwere chọpụta ndị kasị mma sobtaitel eso naanị n'ihi na ị.
Ndepụta Okwu Dezie bụ nnọọ oru oma na-eke, n'ịgbanwe, ngakọrịta, na-asụgharị sobtaitel ahịrị. Na nke a freeware omume ị pụrụ imeziwanye sobtaitel ma ọ bụrụ na ọ na-adịghị synchronized na-eme ka ọhụrụ ndepụta okwu si usoro iheomume ma ọ bụ waveform ma ọ bụ spectrogram. Nke a masterpiece nwere ike na-arụ ọrụ 170+ sobtaitel formats na dị na ọ fọrọ nke nta 30 asụsụ.
Nke a sobtaitel onye bụ otu n'ime ndị kasị mma na-akwado maka SRT na SSA / ịnyịnya ibu sobtaitel formats. Audio waveform onodi bụ ntọala nke a sobtaitel usoro. N'akụkụ, ọ ga-ekwe ka ị ego maka njehie ha, na-netwọk aro, na-eji ọsọ na-egosi nke nwere ike n'ezie melite kara gị ndepụta okwu.
3. Ndepụta Okwu Workshop
Ka ọ pụrụ-kwesŽrŽ si aha, Ndepụta Okwu Workshop bụ otu n'ime ihe ndị kasị facilitative sobtaitel Ndinam software n'echiche na ọ dịghị otú ahụ usoro na mma na ị gaghị ahụ na ya. Ị nwere ike nweta ọrụ enyi na enyi interface, ịgụ & ede engine, customizing ngwaọrụ, asụpe checker, gwara ngwaọrụ, ederede & oge metụtara arụmọrụ, video preview (na ihe ọ bụla ọzọ ị pụrụ) na otu ebe. Ọ bụ a onye-nkwụsị ọrụ na-eweta.
Ọ bụrụ na ị na-eche echiche nke na-eke ọhụrụ ndepụta okwu maka DVD na unu adịghị aka na nwebisiinka, a usoro pụrụ ịchọta dị ka otu n'ime ndị dị ike sobtaitel editọ na gị na ndepụta. Nke a sobtaitel onye ka a wuru na ọkachamara maka DVD authoring nke ga-ekwe ka ị machie ugbu a ndepụta okwu n'elu nke DVD. Ị nwere ike tinye ndepụta okwu nanị otu laa enweghị adịkwa n'echiche nke DVD menu. Ọzọkwa Ọ na atụmatụ DVD previu, nnofega / mgbanwe agba, mmekọrịta, WYSIWYG nchịkọta akụkọ, nkpado wdg
5. Aegisub Advanced Ndepụta Okwu Editor
Aegisub Advanced Ndepụta Okwu Editor bụ nke dị oké aka na e kere eke nke nkiri ndepụta okwu iji ọdịyo ma ọ bụ video. Aegisub bụ otu n'ime ọnwụ onu technology sobtaitel nchịkọta akụkọ nke rụrụ na cross-n'elu ikpo okwu. A elu ngosi akwado translation fọrọ nke nta 30 dị iche iche na-asụ asụsụ mgbe OGE na ndepụta okwu ka ọdịyo na video e mere ngwa ngwa & ngwa ngwa. Aegisub Advanced Ndepụta Okwu Editor nwere 3 ụdị dị iche iche maka 3 dị iche iche sistem - Windows, OS X, na Unix.
DivXLand Media Subtitler bụ otu nke kasị mma ike, dezie na idozi mpụga sobtaitel faịlụ niile ụdị video. O kwesịrị ekwesị ike sobtaitel si larịị ederede faịlụ. DivXLand Media Subtitler e inyere gị aka na nzi previu, isi ederede formatting, otutu subtitling ụdịdị, multi-asụsụ anwansị nsuso, importing & exporting sobtaitel formats, keyboard mkpirisi maka ịrụ ọrụ, akpaka caption usoro iheomume wdg a na usoro-akwado formats dị ka Adobe encore, Sami , DKS, JACOSub 2,7, OVR n'Ide, SubViewer 2.0, ZeroG, FAB Subtitler na ndị ọzọ.
WinSubMux nwere ike n'ọgba ndepụta okwu ka selectable SVCD ma ọ bụ CVD ndepụta okwu. Nke a na usoro e mepụtara na nza nke atụmatụ gụnyere onyeōzi User Interface, multiplex niile iyi na otu nzọụkwụ, zọpụta sub faịlụ, SVCD faịlụ iṅomi, oge shifting, sobtaitel bitmap palette mgbanwe wdg Ọ adabara nnukwu sobtaitel oyiyi.
8. Ndepụta Okwu Editor
Ndepụta Okwu Editor bụ oké sobtaitel eme software na ike idezi, gbawara n'etiti, nkwonkwo & ịsụgharị sobtaitel maka GNU ma ọ bụ Linux ma ọ bụ * BSD usoro na Featuring imezi / Redo, ikpuru na-dobe, GStreamer, ifiọk na mpụga video ọkpụkpọ, sorting ndepụta okwu na ọtụtụ Ọzọ. Nke a GTK + 2 ngwá ọrụ ike na-arụ ọrụ na formats dị ka Adobe encore DVD, Spruce STL, BITC, TTAF, Plain-Text wdg
9. AHD ndepụta okwu Onye kere
AHD ndepụta okwu Onye kere bụ ihe zuru ezu ngwọta subtitling mbipụta. Ọ bụ ihe kasị mma sobtaitel onye ma ọ bụrụ na-eji maka ederede dabeere sobtaitel formats na ike ga-ebute site ná dị ka otu faịlụ. Iji a ọkachamara ngwá ọrụ ị pụrụ akpaghị aka ike ndepụta okwu na ihe ndị kasị ezi na oru oma ụzọ enweghị ọbụna ojiji nke scripts. AHD ka ike a omume maara dị ka AHD ID3 Tag Editor Ka idezie na chekwaa ID3 Tag nsụgharị 1 na nke 2 ..
Iji SubEdit Player i nwere ike tinye sobtaitel tracks na nke ukwuu ala. Idetu ndepụta okwu ozugbo ma ọ bụ ọbụna importing ha si ọ bụla mpụga isi mmalite dị ka internet ma ọ bụ ihe ọ bụla kpọmkwem omume mere ka nke a omume a karị keukwu sobtaitel onye. SubEdit Player akwado formats gụnyere WMA, WMV, WAV, DivX, VOB, M1V, ufọt ufọt, AC3. ASF na ọtụtụ ndị ọzọ.
Top 10 Kasị anya Music Videos
Photobucket Downloader: Olee otú Download Photobucket Videos na a Click
Olee otú Download Music si music.com
1080p Video Player: Olee otú Play 1080p Video
XviD joiner: Ikpokọta Ọtụtụ XviD Files n'ime otu seamlessly
> Resource> Video> Top 10 Ndepụta Okwu Onye kere Software